Advanced Mobile Care အတွက် Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းစောင့်ရှောက်မှု
အဆင့်မြင့် Mobile Care APK
Advanced Mobile Care သည် All-in-one Android လုံခြုံရေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Anti-theft၊ အားကောင်းသော Game Speeder၊ Locker၊ Privacy အကြံပေးနှင့် Cloud Backup ။
Advanced Mobile Care သည်ဆွစ်ဇာလန်စစ်တပ်၏ Android ဓားမြှောင်တပ်ခြင်းဓားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Android သုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများကို Android လုံခြုံရေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများမှကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အခမဲ့ရယူပါ။ သင်၏ Android ဖုန်းမှအကျိုးအပြည့်အဝရယူပါ။
Nexus 7, Nexus 10, Galaxy Note, Asus Transformer နှင့်အခြား Android တက်ဘလက်အများစုကိုထောက်ပံ့ထားသည်။
One touch anti-virus scan ကသင်၏စက်ကိုဗိုင်းရပ်စ်များ၊ malware၊ spyware နှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်အက်ပ်များမှကာကွယ်သည်။ ၎င်းသည် app အသစ်သို့မဟုတ်မသိသောဖိုင်အသစ်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရာတွင်ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုမှအချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်ပေးသည်။
? ခိုးယူမှု -
စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် Anti-theft function ကိုဖွင့်ပါ၊ ပြီးနောက်သင်ဖုန်းပျောက်နေသည့်နေရာကိုနှိုးစက်၊ သော့ခတ်နိုင်၊ ပျောက်သောဖုန်းကိုရှာပါကိုထိပုတ်ပါ။
Optional - ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ရန်နှင့်ဘက်ထရီစွမ်းအင်အများဆုံးအသုံးပြုသည့်အက်ပ်များကိုအကြောင်းကြားရန်ဘက်ထရီချွေတာသည့်စနစ်ကိုသတ်မှတ်ပါ။
Call Blocker သည်မလိုလားအပ်သောဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကိုပိတ်ဆို့ရန်ကူညီသည်။ မလိုလားအပ်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုလက်ဖြင့်အနက်ရောင်စာရင်းထဲသို့ထည့်ပါသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်မဟုတ်သူများထံမှခေါ်ဆိုမှုများကိုသာပိတ်လိုက်ပါကမလိုလားအပ်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကြောင့်သင်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါ။
ထိတွေ့မှုတစ်ခုကသင့်ဖုန်း၏လည်ပတ်မှုနှုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် memory, cache နှင့် junk files များကိုသန့်ရှင်းပေးနိုင်သည်။
ဂိမ်းများကိုနှောင့်နှေးခြင်း (သို့) ဂိမ်းကစားခြင်းနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေရန် Game Speeder နှင့်ဂိမ်းများကိုစတင်ပါ။
App Manager သည် APK ဖိုင်များကိုအသုတ်ခွဲခြင်း၊ အက်ပ်များကို SD ကဒ်သို့ရွှေ့ခြင်း၊ ၎င်းသည်အက်ပ်များအားလုံးကိုဖျက်ခြင်းအတွက်ကြီးမားသော (သို့) မလိုအပ်သောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အမည်၊ အရွယ်အစား၊ အကြိမ်ရေအလိုက်ခွဲခြားနိုင်သည်။
သင်၏လျှို့ဝှက်ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်ဖိုင်များကိုလျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြင့်ဝှက်။ ပိတ်ပါ။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်၊ အဆက်အသွယ်များ၊ တည်နေရာများနှင့် SMS စသည့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူသောအက်ပ်များအားလုံးကိုစကင်ဖတ်ပြီးပြပါ။
သင်၏ Android Desktop မှအမြန်စစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ။ လျင်မြန်စွာစစ်ဆေးသည့်စနစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဘက်ထရီချွေတာသည့်စနစ်ကိုသတ်မှတ်ပါ
လက်ရှိ CURRENT VERSION: 3.2
APUS Turbo …
သြဂုတ်လ 5, 2018 မှာ 9: 12 ညနေ
မတ်လ 16, 2017 မှာ 8: 56 နံနက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2016 မှာ 7: 59 ညနေ
Pls ငါအရေးပေါ်အကူအညီလိုပါတယ် ကျွန်ုပ်သည် AMC ၏အက်ပလီကေးရှင်းဖိုင်ကို AMC တွင်ဝှက်ထားခဲ့ပြီး၎င်း app ကိုမှားယွင်းစွာဖွင့်မရခဲ့ပါ။ လျှို့ဝှက်ဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရယူနိုင်မည်နည်း။
ဧပြီလ 19, 2017 မှာ 3: 09 ညနေ
i amc ကို install လုပ်တယ်။ imp ဓာတ်ပုံတချို့ကိုဝှက်ထားတယ်။ ဖုန်းပျောက်သွားတယ်။ အဲဒီဓာတ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုရနိုင်လဲ
စက်တင်ဘာလ 11, 2014 မှာ 10: 19 နံနက်
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းမှမည်သို့ဖယ်ထုတ်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ် Uninstall လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းမှသုံးပါကအလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းမှမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း။
သြဂုတ်လ 12, 2014 မှာ 4: 35 ညနေ
ငါသည်ဤလျှောက်လွှာကို uninstall လုပ်ပါပြီ ... ။ အချို့ဖုံးကွယ်
အဲဒီဓာတ်ပုံများ…အဲဒီ photos.I ကိုဘယ်လိုပြန်လည်ဆယ်တင်ရမလဲ။ alrdy သည်တူညီသော app ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော်သော့ခတ်ထားသည့် phots.it ကို support formate error ပြနေသည်။
ဇူလိုင်လ 14, 2014 မှာ 4: 05 ညနေ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၎င်း၏ soo ကောင်းတဲ့
ဇွန်လ 28, 2014 မှာ 1: 28 ညနေ
ဒီဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးသည်အလွန်မကောင်းဘူး !!!! မဆိုးပါဘူး
RASID MALIK says:
ဇွန်လ 5, 2014 မှာ 1: 41 ညနေ
ဇွန်လ 3, 2014 မှာ 6: 46 ညနေ
Ramkunwar Prasad says:
မေလ 26, 2014 မှာ 5: 43 ညနေ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကြည့်ရှုရန် privacy locker ကိုမည်သို့ဖယ်ရှားသည်ကိုပြောပြပါ။
မတ်လ 14, 2014 မှာ 11: 18 နံနက်
ဤလျှောက်လွှာကိုကျွန်တော် uninstall လုပ်ပါပြီ။ ဓာတ်ပုံအချို့ကိုဝှက်ထားပါသည်။ ပုံများကိုဝှက်ထားပုံကိုကြည့်ပါ။ .. ..
မတ်လ 31, 2014 မှာ 9: 40 ညနေ
Krishna ဟိန္ဒူ HG says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2014 မှာ 9: 59 နံနက်
ငါဒီ site ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး Antitheft ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Alaram ကိုနှိပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းခေါ်ဆိုချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုမရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ကြင်နာစွာဘာလုပ်ရမှန်းနှင့်မည်သို့ရပ်တန့်ဖို့အကြံပေးပါ
proxy ကို says:
အောက်တိုဘာလ 2, 2013 မှာ 1: 50 ညနေ